Home Wararka Dibada Waddanka Yurub ku yaalla ee xabsiyadiisa ay maxbuus la’aan u xidhmayaan
Waddanka Yurub ku yaalla ee xabsiyadiisa ay maxbuus la’aan u xidhmayaan
Waxaa laga yaabaa in ay dadka ku adkaato inay rumaystaan inay jirto meel adduunka ka mid ah oo xabsiyada ay cidlo yihiin. Xabsiyada aduunka oo dhan waxa lagu yaqaannaa in ay buux dhaafiyeen dad dambiilayaal ah, kuwaas oo qaarkood noloshoodaba in ay halkaa ku jiraan ay ku xukuman yihiin.
Xilli adduunka ay ku sii baahayaan danbiyada iyo dhibaatooyinku dalka oo Yurub ku yaal waxa uu qorshaynayaa in uu gebi ahaan ba albaabbada u laabo xabsiyadiisa, kaddib markii dad loo waayey. Waxa la yaab leh, Nederlaan waa waddan xilliyada qaar gaadha heer aanay cidna u xidhnayn. Ku dhawaad sagaal sano ka hor, 2013, Nederlaan waxaa ku xidhnaa 19 maxbuus oo keliya, halka sannadihii ka danbeeyey qaarkood aanay jirin ba cid xidhnayd. Haddana waxaa la soo sheegayaa keliya soddomeeyo ayaa xidhan. Sida lagu sheegay warbixinta Telegraph UK oo la daabacay 2016, Wasaaradda Caddaaladda ee Nederlaan waxay soo jeedisay in dembiyada guud ay hoos u dhacaan 0.9 boqolkiiba sannadkaas suutragalna tahay shanta sano ee soo socota in ay sii yaraato.
Xidhitaanka iyo joojinta xabsiyada ee dalkanb ayaa la macno ah in ilaa 2,000 oo qof ay waayaan shaqooyinkooda, 700 oo ka mid ah oo kaliya ayaa loo wareejin doonaa shaqooyin kale oo ay dowladdu heli karto.
Si kastaba ha ahaatee, go’aanku wuxuu sidoo kale ka dhigan yahay in waddanku u guulaystay nidaam ahaan, dawlad ahaan iyo muwaadiniin ahaanba.
Goobihii iyi dhismayaashii loogu talogalay xabsiyada ayaa badankooda loo beddelayaa goobo si kale looga faa’iidaysan karo iyaga oo qaarkood laga dhigay goobo waxbarasho, sida dugsiyo, iyo meelo kale oo daryeel ama lagu soo dhaweeyo qaxootiga. Arinta xabsiyada faaruqa ah ayaa gaartay heer sanadkii hore ay Nederland maxaabiis ka soo dajiso Norway si ay u buuxsamaan xarumahooda iyo nidaamkooda.
Ku dhawaad labaatan sano ka hor Netherland waxay ahayd mid ka mid ah dalalka leh heerarka ugu sarreeya ee xabsiyada Yurub, laakiin hadda waxay sheeganeysaa mid ka mid ah kuwa ugu hooseeya.
Heerarka dembiyada dalkan ayaa hoos u dhacayey sannad kasta, taasoo keentay in xabsiyo badan oo waddankaas ka mid ah ay si joogto ah u xidhmaan.
Sida laga soo xigtay xogta xarunta cadaaladda, tirada xukunnada xabsiyada ayaa hoos uga dhacay 42,000 sanadkii 2008 ilaa 31,000 sanadka 2018. 2009 wasaarada cadaalada Holland ayaa ku dhawaaqday in la xirayo 8 xabsi, taasoo keentay in 1,200 oo shaqooyin ah laga gooyo xabsiga. Sanadkii 2013 ayaa la go’aamiyay in la xiro 19 xabsi maadaama tirada dambiyada la diiwaan geliyay ay ahaayeen kuwa ugu yar Yurub. Sababta loo aaneynayo hoos u dhaca dambiyada waxaa ka mid ah xukun gaaban oo la xidhiidha dambiyada la xidhiidha daroogada iyo mukhaadaraadka iyo in lagu soo rogo ganaax adag halkii xabsiga la dhigi lahaa.
Xabsiyadan ayaa laga dhigay xarumo qaxooti, guryo iyo hoteello. Qaar ka mid ah xabsiyadaas madhan ayaa loosoo dhoofiyayaa dalal kale maxaabiistooda, si ay ugu martigeliyaan. Sannadkii 2018, dawladda Nederlaan waxay go’aansatay inay xidho afar kale oo xabsiyada qaranka ah iyadoo heerka dembigu uu hoos ugu dhacay heerkii ugu hooseeyay tan iyo 1980-kii.
Heerarka faqriga oo hooseeya, badbaadada bulsheed ee sarreeya iyo dhaqanka aan maadiga ahayn – Nederlaan, sid aoo kale hodantinnimada iyo nolosha fudud ee dadka dalkaas dhammaantood waxay door ka ciyaaraan dhimista dembiyada.
Fanaanka fadhigiisu yahay Amsterdam, ahnaa qoraa iyo ganacsade ee Rivelino Rigters oo mar lagu xidhay isaga oo yar xabsi dalkan ah ayaa ku doodaya in wanaagga iyo samaanta qofnimo aan laga dhaxlin xabsiyada.
“Qof la xidho maaha hab lagu xalliyo dhibaatada,” Rigters ayaa ku adkaystay. “Mararka qaar waxa ay ka dhigtaa mid ka sii weyn sababtoo ah dadka qaarkiis, dembigu wuxuu ahaa midkii ugu dambeeyay ama ma jirin hab kale oo ay ku noolaadaan.”
Previous articleXagee ku danbeeyay mooshinkii laga hadal-hayay Baarlamanka Puntland?
Next articleInter Milan Oo Arsenal U Soo Bandhigaysa Saxiixa Stefan de Vrij & Xiddiga Ay Badalkiisa Ka Doonayso Oo La Ogaaday.